Vaovao - Ahoana no hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokala E-Commerce anao
Raha ny momba ny tranonkalanao e-varotra, ny fanomezana traikefa tsara ho an'ny mpampiasa (UX) dia mitaky zavatra betsaka kokoa noho ny famolavolana tsara tarehy fotsiny.
Izy io dia misy singa maromaro, miara-miasa mba hanampiana ireo olona mivezivezy amin'ny tranokala hitety sy hahita izay tadiaviny. Avy amin'ny antsipiriany momba ny vokatra ka hatramin'ny rafitry ny tranokala, ny singa tsirairay amin'ireo dia tsy maintsy havaozina miaraka amin'ny kalitao UX ao an-tsaina.
Vonona hianatra bebe kokoa ve ianao? Raha izany dia mamakia hatrany.
Tariho ny mpitsidika anao amin'ny toro-làlana manokana momba ny vokatra na serivisy
Miaraka amin'ny tolo-kevitry ny vokatra natokana ho azy, azonao atao ny mitarika ny mpampiasa anao amin'ny vokatra tsara indrindra ary manampy azy ireo hahita vaovao.
Ity dia hanampy amin'ny fampitomboana ny sandan'ny volavolan-tsolika sy ny famoronana UX tsara kokoa. Mitovy amin'ny fananana solontenan'ny mpanjifa mivantana manome sosokevitra momba ny vokatra ho an'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fanomezana tolo-kevitra, azonao atao ihany koa ny mamorona fizarana "trending" na "mpivarotra tsara indrindra". Ireo dia handeha hiasa tsara kokoa noho ny porofo ara-tsosialy omeny. Mahatonga ny mpanjifa hino ihany koa fa raha mahita an'ireto vokatra ireto ny olon-kafa dia mety ho antony tsara izany noho ny antony iray - dia mety tafiditra ao anatin'izany ireo entana tsara indrindra hovidiana. Ny olon-drehetra dia te-ho anisan'ny fironana farany.
Fomba iray hafa hampiasana ny tolo-kevitra amin'ny fivarotana na fivarotana mivarotra. Amin'ny fivarotana amidy, azonao atao ny mampiseho ny olona mitsidika ny tranonkalanao toy ny vokatra avo lenta kokoa.
Ho an'ny fivarotana an-tsokosoko dia azonao atao ny mampiseho ireo vokatra mifameno izay hanampy amin'ny fanatsarana ny traikefanao amin'ny vokatra ankapobeny.
Mamorona tranokala mora zahana sy voalamina
Alao an-tsaina fotsiny raha niditra tao amin'ny fivarotana enta-mavesatra ianao mba hahitanao fa mifangaro ny zava-drehetra ary tsy misy filaminana.
Inona no ho tsapanao? Very, sosotra, sosotra? Toy izany koa no mitranga ho an'ireo mpitsidika tranokala e-commerce raha toa ka zana-kazo ny fitetezana ny tranokalanao. Haharitra kokoa ny fotoana hahitan'izy ireo ny vokatra tadiaviny, ary hanasarotra ny fahitany vaovao
Ny mety manontany tena anao dia ny hoe inona no atao hoe fitetezana tranokala tsara? Tena miankina amin'ny hoe iza no mpanjifa idealy anao sy ny fomba fivarotan'izy ireo. Io no hamaritana ireo fanasokajiana vokatra ampiasainao, ireo sokajy ampiasainao, ary izay asongadinao amin'ny menio lehibe. Na dia marina aza izany dia misy fanao tsara indrindra azonao ampiasaina hanatsarana ny UX.
Ny dingana voalohany dia ny fisafidianana ireo sokajy menio ambony. Raha mivarotra entana ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ianao, ireo dia ho ireo sokajy asongadina eo an-tampony, miaraka amin'ireo vokatra sokajy ambony.
Ny fomba fanao tsara indrindra dia ny fampiasana sivana. Ireo dia hanampy olona hahita ny zavatra tadiaviny. Ny sasany amin'ireo fahita indrindra dia misy ny habeny, ny loko, ny vidiny ary ny sokajy. Ireo sivana ireo dia afaka manampy amin'ny famonjena ny mpikaroka mandritra ny fotoana maro ary hahatonga ny fizotran'ny fiantsenana ho mora sy mahafinaritra kokoa.
Mety ho zavatra azon'ny ekipan'ny fitantanana tambajotra IT anao io.
Mangataha ary henoy ny valin'ny hevitry ny mpanjifa
Na dia manaraka ny fomba fanao tsara indrindra rehetra aza ianao dia hisy zavatra azonao atao tsara kokoa.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fikatsahanao ny hevitry ny mpanjifa. Ity dia hampahafantatra anao ireo faritra mila fanatsarana sy izay hanampy anao hanao fanovana mety. Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpanjifa dia afaka manome soso-kevitra ho an'ny faritra tokony hatsaraina, izay hanampy anao hamonjy fotoana momba izay tokony hatao na ovaina.
Misy singa vitsivitsy izay miantoka ny fizotran'ny hevitra mahomby. Iray amin'izany ny mandeha ho azy. Azonao atao ny mandeha ho azy ny mailaka fangatahana hevitra momba ny hevitrao hivoaka rehefa avy nividy voalohany ny olona iray na rehefa lasa ny fotoana sasany. Ity dia hanampy amin'ny fiantohana ny tsy fitoviana ary hamela anao handanjalanja ity fizotrany ity.
Raha tsy mampiasa automatique ianao dia mila mandefa ireo mailaka ireo indray mandeha, rehefa tadidinao. Ity dia dingana tsy mahomby sy mandany fotoana.
Ilaina ihany koa ny manome famporisihana ho an'ny mpanjifa izay manome valiny. Mety ho fanomezana na kaody fihenam-bidy ity. Ity dia fomba tsara hanentanana ny olona maro hilaza aminao ny heviny. Misy fampiharana marobe azonao ampiasaina hanampiana ny fanamorana ity fomba ity sy hanampiana anao hanaraka ny valiny, izay azo ampidirina amin'ireo sehatra e-varotra malaza indrindra, anisan'izany ny Shopify.
Rehefa avy nangoninao ny hevitra rehetra azonao atao dia azonao aseho ny soso-kevitra sy ny fampahalalana eo ambanin'ny vokatra na amin'ny faritra samihafa amin'ny tranokala. Ity dia hanampy anao hanana fahatokisana bebe kokoa amin'ireo mpitsidika vaovao.
Raha mahazo valiny ratsy ianao dia aza hadino ny manaraka ny mpanjifa tsy afa-po hampahafantatra azy ireo fa efa voavaha ny olany.
Manolora Safidy Save amin'ny Wishlist
Indraindray, ny manampy zavatra amin'ny sarety dia mety ho fanoloran-tena amin'ny mpividy an-tserasera.
Na dia mety mila zavatra aza izy ireo dia mety maniry ihany koa ny manohy mizaha ireo zavatra samihafa hampitahana azy. Na, mety tsy azon'izy ireo antoka ny zavatra iray ary te hitahiry izany izy ireo amin'ny fividianana amin'ny fotoana hafa.
Na inona na inona antony, ny fanomezana safidy lisitra faniriana ho an'ny mpanjifa hitahiry ny vokatra dia fomba tsara hampihenana ny tsindry miaraka amin'ny fametrahana zavatra ao anaty sarety.
Raha tsy manome an'ity safidy ity ianao dia mety tsy maintsy mahatadidy izay tiany ny mpividy ary avy eo manandrana mahita azy ireo amin'ny fotoana hafa. Izany dia miteraka asa bebe kokoa ho an'ny mpanjifa ary mampihena ny UX amin'ny ankapobeny. Ary koa, rehefa mampihatra ny safidinao tahiry maniry ianao dia manana ny mombamomba ny mpampiasa.
Raha vao manindry an'ity bokotra ity izy ireo dia azonao atao ny mitondra azy ireo amin'ny fisoratana anarana tsotra mba hahazoana antoka fa voatahiry ny safidin'izy ireo.
Mahafinaritra ny mpampiasa tranonkala e-varotra anao?
Ity dia zavatra iray izay tokony hodinihin'ny tompona tranokala rehetra. Raha "tsia" ny valiny dia mety tsara raha manova kely ianao.
Ny fanaovana izany dia hitarika mpanjifa sambatra kokoa ary vokatr'izany dia misy fiovam-po bebe kokoa. Aza hadino ny hitadidy an'io ao an-tsainao ary ampiasao ireo torohevitra etsy ambony hahazoana ny vokatra tsara indrindra.